के छ अाईफोन ६ र सामसुङ ग्यालेक्सी नोट ४ को फीचर्स ? - Mobiles Khabar
के छ अाईफोन ६ र सामसुङ ग्यालेक्सी नोट ४ को फीचर्स ?
मोबाईलस् खबर २७ भाद्र २०७१, शुक्रबार ०८:४२
काठमाडौं, २७ भदौ । केहि दिन अघि एप्पल कम्पनीले निकै प्रतिक्षित एप्पल आईफोन ६ तथा आईफोन ६ प्लस सार्वजनिक गर्यो । यसका साथै एप्पलले एक पटक आफ्नो विश्वासनियतालाई कायम गर्दै शानदार फीचर्ससहितको स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो । एप्पल आईफोन ६ का साथै एक पटक फेरी आफ्नो प्रतिद्धन्दी कम्पनी सामसुङलाई कडा चुनौती दिएको छ ।
सामसुङले पनि एप्पलको आईफोनलाई टक्कर दिन हालै आफ्नो अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट फ्याबलेट सामसुङ ग्यालेक्सी नोट ४ सार्वजनिक गरेको थियो । सामसु९को फ्याबलेटको फीचर्सपनि कसैको भन्दा कम छैन् । यी दुई कम्पनीको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा फाइदा स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई भइरहेको छ ।
यी दूई कम्पनीको आफ्ना फ्ल्यागशिप फोनहरुको बारेमा केहि जानकारी हेरौ –
फीचर आईफोन6प्लस
ग्यालेक्सी नोट 4
डिस्प्ले 5.5 इंच 5.7 इंच
रिज़ोल्यूशन 1080×1920 1440 x 2560
डिस्प्ले टाइप IPS सुपर ऑल्मंड
डायमेंशन 158×77.8×7.1 153.5×78.6×8.5
तौल 172 ग्राम 176 ग्राम
प्रोसेसर A8 with MB coprocessor 2.7GHZ क्वालकॉम स्न्यापड्र्यागन क्वाडकोर
र्याम — 3GB
अपरेटिंग सिस्टम IOS8 एंड्रॉयड 4.4, टचविज़
मेमोरी 16GB/64GB/128GB 32GB 128GB तक बढाउन सकिने
ब्याट्री — 3,220mAh
प्राइमरी क्यामरा 8 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल
सेकेंड्री क्यामरा 1.2 मेगापिक्सल 3.7 मेगापिक्सल
Apple inc. ims Iphone6Samsung Galaxy Note4२७ भाद्र २०७१, शुक्रबार ०८:४२
Previous: नेपाली बजारमा तीन प्रकारका नयाँ ट्याब्लेट
Next: चिनियाँ मोबाइल ब्राण्ड जियोनी नेपाली बजारमा
भीभो भी नाइन यूथ स्मार्टफोन नेपालमा आउने, फुल एचडीप्लस एमोलेड डिस्प्ले र ड्यूल रियर क्यामरा
९ बैशाख २०७५, आईतवार १२:११
७ बैशाख २०७५, शुक्रबार ११:२०